Momba anay | Mamo Power Technology Co., Ltd.
MAMO POWER natsangana tamin'ny taona 2004 dia an'i Bubugao Electronics Industry Co., Ltd. Ny velaran'ny famokarana dia mirefy 24000 metatra toradroa. Nahazo mari-pahaizana CE, nandalo ny mari-pahaizana ISO90001, ISO14001, OHSAS1800 ary nahazo patanty famoronana maro. Amin'ny maha mpanamboatra milina matihanina, asa MAMO POWER amin'ny R% D, fanamboarana, varotra ary serivisy, napetraka hatrany amin'ny paikady herinaratra ny rafitra Mamo. mpamatsy vahaolana. Mamo fahefana dia afaka manamboatra vahaolana amin'ny ankapobeny ho an'ny mpanjifa mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa. Miantehitra amin'ny ekipa R&D matanjaka sy ny tombony ara-teknika, ny vokatra Mamo dia azo noforonina manokana sy novolavolaina arakaraka ny filan'ny mpanjifa samihafa, ary manohy manome ny mpanjifa fanavaozana ny vokatra, fanovana asa ary serivisy fanatsarana fanarahana hafa mifototra amin'ny mpanjifa filàna namorona maodely fandraharahana Mamo tokana. Ny fahaizan'ny famolavolana vahaolana momba ny herinaratra manokana no fototry ny fifaninanana ifotony sy ny sanda lehibe ampiana. Araka ny filan'ny mpanjifa isan-karazany, ny fiasan-tsaina, ny fahaizan'ny fihenan'ny tabataba, ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny fanala, ny fanoherana ny harafesina ary ny modely seismika dia atambatra ary ahatongavana hahatsapa ny fanatsarana hatrany ny sanda fanampiny amin'ny vokatra, tsy miankina amin'ny ony ambony mpamatsy sy mpanamboatra outsourcing.
Huineng system, ny sehatra internet fitaovana izay manome fanaraha-maso lavitra sy fitantanana fotoana tena izy ho an'ireo mpampiasa.
Miaraka amin'ny fepetra famokarana tonga lafatra, fitaovana fanandramana mandroso ary firaisana mafy amin'ny ekipa R & D, teknolojia, famokarana ary serivisy. "Serivisy tena tsara sy fanompoana marina" no hany polisy manara-penitra ny MAMO, manolo-tena amin'ny fanatsarana sy fanavaozana mitohy, famokarana vokatra avo lenta, fanomezana serivisy manara-penitra, ekena sy derain'ny ankamaroan'ny mpanjifa.
Ny vokatra MAMO andiany dia be mpampiasa any amin'ny hopitaly, fandefasana, vola, serasera, hotely, varotra, trano sy trano ary orinasa maro hafa. Ny vokatra manohana indrindra dia ny Perkins, DEUTZ, Shangchai, Cummins, Volvo, doosan-daewoo, jichai ary dynamo marathon sy Stamford, sns.
Fikambanan'ny Fetiben'ny lohataona
Fiofanana sy fianarana
Prospect sy famintinana